नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यालय ह्वाइट हाउसको आसपासमा दाह्रीवालहरुको आन्दोलन !
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यालय ह्वाइट हाउसको आसपासमा दाह्रीवालहरुको आन्दोलन !
आजभोलि अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यालय ह्वाइट हाउसको आसपासमा केही दाह्रीवालहरु दिनदिनै जम्मा हुन्छन् र जुलुस गर्छन् । उनीहरुले सरकारको विरुद्धमा भाषणबाजी समेत गर्छन् ।आखिर किन यसो गरिरहेका होलान् उनीहरु ?अनी किन दाह्रीवाल मात्र आन्दोलनमा होमिएका होलान् ? यसले अवश्यपनि एउटा प्रश्न जन्माउनु स्वभाविकै हो । कतै बाराक ओबामाले पनि दाह्री पाल्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै उनीहरु आन्दोलनमा त उत्रिएका होइनन् ? वास्तवमा यी दाह्रीवाल तथा दाह्रीप्रेमीहरु सरकारको पछिल्लो कदमको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सरकारले दाह्री जुंगाको सौन्दर्य प्रशाधनका सामाग्रीमा लाग्दै आएको करमा वृद्धि गरेको विरोधमा उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले करमा वृद्धि गर्दा दाह्रीवालहरुको अधिकार कटौती भएको उनीहरुको दाबी छ । कर वृद्धि हुँदा आफुहरुलाई दाह्रीको स्याहारसुसार गर्न बढि पैसा लाग्ने र दाह्री पाल्ने अधिकारबाटै बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको दाबी दाह्रीवालहरुको रहेको छ । ओबामा प्रशासनले भने दाह्रीवालहरुको यो गुनासोको अझैसम्म सुनुवाइ गरेको छैन ।
Posted by www.Nepalmother.com at 10:12 AM